I-Air conditioned Villa e-Digha - I-Airbnb
I-Air conditioned Villa e-Digha
Siyakwamukela ekuzithokoziseni okunethezekile nokungenakulibaleka e-Digha. Emi ngokuziqhenya endaweni ephakeme enkabeni ye-Digha, ipharadesi laseMpumalanga, kukhona ukufinyelela okulula ezindaweni ezithandwayo zasendaweni, ezokuthutha kanye nebhishi! Sihlinzeka ngokungenisa izihambi namasevisi ukuze afanelane nazo zonke izidingo,kusukela ekuthatheni izivakashi nasemindenini yazo kuya ochwepheshe bebhizinisi. Siyikhaya elikude nasekhaya, iholide elihle kakhulu leholide lasebhishi elingaba nalo.
Ukukhethwa kwamagumbi e-Villa asanda kulungiswa anawo wonke amasevisi esimanje, ithelevishini ye-satellite, i-Intercom, isevisi yegumbi esheshayo nephumelelayo yamahora angu-24. Singahlinzeka ngokudlela ngaphakathi kwekamelo ngesethingi yangasese kakhudlwana. I-Villa enamakamelo okulala amane anendawo yokudlela ilungele iholide lomndeni omkhulu.
I-DI ImperA, eyaziwa ngamabhishi ayo, iyibhishi elihle kakhulu leholide lase-Bay of Bengal. Ibhishi elihle ngokumangazayo liyipharadesi langempela labathandi bemvelo. Ulwandle oluzolile lukhanga kakhulu! Indawo yamaphupho yase-Digha ogwini olusempumalanga ye-India idume umhlaba wonke ngamabhishi ayo aqondile nanzima. I-Digha ingamakhilomitha ayisikhombisa okuzijabulisa nokunethezeka. Ngenkathi usebhishi lase-Digha uziphumulele elangeni, olwandle, ekutshuzeni emagagasini nasesihlabathini. Ulwandle luphephile ukubhukuda.
Sivumelana nezimo nazo zonke izinhlobo zokuxhumana I-imeyili , ucingo, umlayezo wombhalo, njll.